Idle detection API in Chrome 94 isuse igagasi lokugxeka | Kusuka kuLinux
Okuhle | 24/09/2021 22:31 | Izaziso
Lapho kwethulwa inguqulo ye-Chrome engu-94 se yenza ukufakwa okuzenzakalelayo kwe-API yokutholwa kokungenzi lutho, okuqubule igagasi lokugxekwa ngezixhumanisi zeziphikiso ezivela kubathuthukisi beFirefox neWebKit / Safari.
I-idle detection API ivumela amasayithi ukuthi abone lapho umsebenzisi engasebenzi, okungukuthi, ayihlangani nekhibhodi / igundane noma isebenza kwenye i-monitor. I-API futhi ikwazisa ukuthi ngabe isilondolozi sesikrini sisebenza ohlelweni noma cha. Isaziso sokungasebenzi senziwa ngokuthumela isaziso ngemuva kokufinyelela umkhawulo wokunqunyelwa kusengaphambili onqunyelwe ngaphambili, inani lalo elincane lisethelwe kuminithi elingu-1.
Kubalulekile ukuthi unake ukusebenzisa i-API yokungenzi lutho kudinga ukunikezwa okucacile kobufakazi bomsebenzisi, okusho ukuthi, uma uhlelo lokusebenza luzama ukunquma iqiniso lokungasebenzi okokuqala ngqa, umsebenzisi uzokhonjiswa iwindi elinesiphakamiso sokunikeza izimvume noma ukuvimba ukusebenza.
Izinhlelo zokusebenza zengxoxo, ukuxhumana nomphakathi kanye nezokuxhumana kubizwa ngezicelo, okuyi ingashintsha isimo somsebenzisi ngokuya ngobukhona bayo kukhompyutha noma ukuhlehlise ukuboniswa kwezaziso yemilayezo emisha kuze kufike umsebenzisi.
I-API nayo ingasetshenziswa kwezinye izinhlelo zokusebenza ukubuyela esikrinini sokuqala ngemuva kwesikhathi esinqunyiwe sokungasebenzi, noma ukukhubaza ukusebenza okusebenzisanayo, okusetshenziswa kakhulu kwezinsizakusebenza, njengokuhlela kabusha amashadi ayinkimbinkimbi avuselelwa njalo lapho umsebenzisi engekho esikrinini. ikhompyutha.
Isikhundla salabo abaphikisana nokunika amandla i-API ukuthola okungasebenzi kubila eqinisweni lokuthi imininingwane yokuthi umsebenzisi uku-computer noma cha ingathathwa njengeyimfihlo. Ngokungeziwe ekusetshenzisweni okusebenzisekayo, le API ingasetshenziswa futhi hhayi ngezinhloso ezinhle, ngokwesibonelo, ukuzama ukuxhaphaza ukuba sengozini ngenkathi umsebenzisi engekho noma ukufihla imisebenzi enobungozi ebonakalayo, njengokumba.
Usebenzisa i-API okukhulunywa ngayo, Imininingwane ngamaphethini wokuziphatha ingaqoqwa futhi yomsebenzisi nesigqi sansuku zonke somsebenzi wabo. Isibonelo, ungathola ukuthi umsebenzisi uvame ukuya nini emini noma eshiya indawo yokusebenza. Kumongo wesicelo sokuqinisekisa sokugunyazwa okuyimpoqo, i-Google ibona lokhu kukhathazeka njengokungabalulekile.
Ukukhubaza ngokuphelele i-API yokutholwa kokungenzi lutho, kunikezwa inketho ekhethekile engxenyeni ethi "Ubumfihlo nokuvikeleka" kwezilungiselelo ("chrome: // settings / content / idleDetection").
Futhi, Kufanele sicabangele inothi evela kubathuthukisi be-Chrome mayelana nokuthuthuka kwamasu amasha wokuqinisekisa ukuphathwa kwememori ephephile. Ngokuya nge-Google, i-70% yezinkinga zokuphepha ku-Chrome ibangelwa amaphutha ememori, njengokusebenzisa ngemuva kokufinyelela kwamahhala kusibhafa. Izindlela ezintathu eziyinhloko zokubhekana namaphutha anjalo ziyabonakala: kuqinisa amasheke wesikhathi sokuhlanganisa, ukuvimba amaphutha wesikhathi sokusebenza, nokusebenzisa ulimi oluphephe inkumbulo.
Kubikwa ukuthi izivivinyo seziqalile ukungeza ikhono lokuthuthukisa izinto ngolimi lwe-Rust kukhrikhodi ye-Chromium. Ikhodi yeRust ayikafakwa ekuhlanganisweni okunikezwe abasebenzisi futhi inhloso yayo enkulu ukuhlola ukuthi kungenzeka yini ukuthi kuthuthukiswe izingxenye ezithile zesiphequluli kuRust bese uzihlanganisa nazo zonke ezinye izingxenye ezibhalwe ku-C ++.
Ngokufana, kwikhodi ye-C ++, iphrojekthi iyaqhubeka nokuthuthuka isebenzisa uhlobo lweMiraclePtr esikhundleni sezinkomba eziluhlaza ukuvimba ukuthi kungenzeka kusizakale ubuthakathaka obudalwe ukufinyelela amabhulokhi enkumbulo asekhululiwe, futhi izindlela ezintsha ziphakanyiswa ukuthola amaphutha esiteji ukuhlanganiswa.
Futhi, I-Google iqala ucwaningo lokuhlola ukunqamuka kwesayithi okungenzeka kube khona ngemuva kokuthi isiphequluli sifinyelele kunguqulo enamadijithi amathathu esikhundleni sezimbili.
Ngokuyinhloko, isethingi "chrome: // flags # force-major-version-to-100" ivele kuzinguqulo zezilingo ze-Chrome 96, lapho icaciswa kunhlokweni we-User-Agent, inguqulo 100 (Chrome / 100.0.4650.4. XNUMX) kuzoba kukhonjisiwe. Ngo-Agasti, ukuhlolwa okufanayo kwenziwa eFirefox, okuveze izinkinga ngokusingathwa kwezinguqulo ezinamadijithi amathathu kwamanye amasayithi.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Izaziso » I-Idle detection API ku-Chrome 94 isuse igagasi lokugxekwa